आज आइतबार : सूर्यदेवको दिन, कस्तो होला राशिफल ? – Gandaki Voice
Home/धर्म/ज्योतिष/आज आइतबार : सूर्यदेवको दिन, कस्तो होला राशिफल ?
आज मिति २०७७ पुस १९ गते आइतबार, इस्वीसंवत जनवरी ३ तारिक सन् २०२१, श्रीशाके १९४२, नेपाल संवत् ११४१, प्रमादी नामको संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । हेमन्त ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार पौषकृष्णपक्ष चलिरहेको छ ।
सौरमान अनुसार आज पौषकृष्णपक्षको चतुर्थी तिथि रहनेछ । आज मघा नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा प्रीति, करणमा कौलव, आनन्दादि योगमा मुद्गर रहनेछ ।
सूर्य धनु राशिमा, चन्द्रमा सिंह राशिमा रहनेछ । आज दिनमान २५ घटि ५७ पला अर्थात १० घण्टा २६ मिनेटको रहनेछ । आज सूर्योदय काठमाडौं केन्द्र विन्दुमा रही बिहान ६ बजेर ५७ मिनेटमा रुद्र मुहूर्तमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ ठीक ५ बजेर २० मिनेटमा हुनेछ ।
मीन : मीन राशि भएकाहरूका लागि आज शुभ छ । पढाई लेखार्ईमा चाहेको सफलता हात लाग्ने हुँदा गन्तब्य पहिल्याउन सहज हुनेछ । भौतिक सम्पति तथा सवारी साधन प्राप्तीको योग रहेको छ भने विलासी वस्तुको प्रयोगमार्फत अरुको मन आफूतिर लोभ्याउन सकिनेछ । आज काल योग परेकाले सकभर यात्रा नगर्नुहोला त्यसमा पनि उत्तर दिशाको यात्रा राम्रो हुनेछैन । आर्थिक कारोबार हुन सक्नेछ । पाउनुपर्ने धन पनि प्राप्त हुनेछ ।
साइत : आज चन्द्रमा सिंह राशिमा छन् । त्यसैले पूर्व र उत्तर बाहेक अन्य दिशाको यात्रा शुभ छैन । आज आइतबार परेकाले पश्चिम दिशाको यात्रा गर्दै नगर्नुहोला । यदि बाध्यता नै छ भने धार्मिक उपाय अपनाएर मात्र यात्रा गर्नुहोला । शुभ बेलामा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा प्रारम्भ गर्नुुहोला । साथै पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर पूर्व तथा स्त्रीको नेतृत्वमा वायव्य अर्थात उत्तर पश्चिम र ईशान अर्थात उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ । यदि तपाइँ विशेष यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ दिशामा मात्रै गर्नुपर्दछ ।
बिहान ६ः५४ बजेदेखि ८ः१३ बजेसम्म उद्धेग बेला
बिहान ८ः१३ बजेदेखि ९ः३१ बजेसम्म चर बेला
बिहान ९ः३१ बजेदेखि १०ः५० बजेसम्म लाभ बेला
बिहान १०ः५० बजेदेखि १२ः०८ बजेसम्म अमृत बेला
बिहान १२ः०८ बजेदेखि १ः२६ बजेसम्म काल बेला
दिनमा १ः२६ बजेदेखि २ः४५ बजेसम्म शुभ बेला
दिउँसो २ः४०३ बजेदेखि ५ः२१ बजेसम्म रोग बेला